Kusho ukuthini kwezolimo yangasese (LPH), kungatholakala amadokhumenti omthetho eziningana, efanele kunayo zazo namuhla Ikhodi Land futhi nenombolo umthetho kahulumeni 112 (yokutholwa ngo-2003, July 7). Ngokwe yokugcina, leli gama ehloselwe umsebenzi kohwebo ku ukutshala kanye nokusetshenziswa siqu kwemikhiqizo yezolimo.
Iziphi izici ine LPH? Efunda okwakubhalwe kulowo mbhalo iziqondiso kubonisa ukuthi le ndlela yakhe yokusingatha isakhamuzi athwalisane wedwa noma nomkhaya wakho ngaphandle ukuqasha abasebenzi ngaphandle. Zonke ukuthi idale ozinikele ngalezi zinhloso kwesiqinti nomhlaba, impahla yakhe, futhi loko kungenziwa, isibonelo, emakethe. Kulokhu umsebenzi wayo ngeke kucatshangelwe ebhizinisi.
Kusho ilungelo ukuqhuba kanjani LPH? Sokuqonda izihloko ezintathu isibalo ezilandisiwe inombolo umthetho federal 112 imibiko ukuthi umnotho yangasese kungaholela zonke izakhamuzi anekhono, nge bhalisiwe kuphela ezweni, kodwa iyiphi yokubhalisa ezengeziwe lwezomthetho LPH liyadingeka. Kwesabelo izidingo ezinjalo zihlukaniswe yasendlini futhi ensimini. Umehluko omkhulu itholakala lokuthi ukuthi endaweni yomkhuleko insimu izakhiwo kanye nezinhlaka bazakha. Indlu yokuhlala, Umbuso indawo amakamelo, zokugcina, Spas, kanye nabanye abantu bayovuswa epulazini.
Lapho eyeka kokuqhuba LPH? Sokuqonda sihloko №10 yomthetho efanayo icacisa ukuthi lolu hlobo ukuphathwa inqanyulwa ngokuqondene ekunqanyulweni kobunikazi ezweni lapho ipulazi likhona. Imisebenzi yalolu hlobo umndeni "ibhizinisi" igunya anikezwe ezweni alinalo ilungelo ukugxambukela nje hhayi ukuqaphela yimuphi ukwephulwa komthetho.
Indlela ukuhlela amapulazi yangasese? Land ngaphansi kwaso ingatholakala kubunikazi kamasipala noma isimo. Futhi kuba lula ukwenza izakhamuzi bhalisiwe emaphandleni, njengezakhamuzi, iziza ezinjalo zitholakala kuphela uma indawo evulekile.
Kusho ukuthini ngoba umnotho smallholders zwe? Sokuqonda idatha kwezibalo libonisa ukuthi le ndlela yomsebenzi wezomnotho kubantu abangaphezu kuka-nanhlanu labatigidzi letingu eRussia, anawo lapho kukhona abantu abangaba yizigidi ezingu-6.4 hectare umhlaba. Bona ezifuywa izinkomo, amahhashi, izingulube, ekhiqizwa ezithela abalulekile amazambane, uju ekhishwe, izithelo nezitshalo berry engadini kanye nezihlahla.
Ngokuvamile, isimo unesithakazelo kakhulu ekuthuthukeni kwale ndawo ezibalulekile, izenzo zomthetho ngakho usizo ngesimo kwesakhiwonchanti, ukudala amaphuzu ngemikhiqizo, izinhlangano oludlulele ukuhlolwa wezilwane, ukulawula kubhubhane ezilwaneni, ukuhlinzeka ubuchwepheshe repayable, usizo lwezimali, ukwethulwa ubuchwepheshe eziphambili.
Umlando kohwebo eRussia
Isithombe Petersburg enovelini "Ubugebengu Ziyisijeziso" by F. M. Dostoevskogo